Chikunguru. 7 edhisheni nhau dzemwedzi wechinomwe wegore | Zvazvino Zvinyorwa
Chikunguru. 7 edhiyo nhau dzemwedzi wechinomwe wegore
Kusvika julio. Yakazara zhizha, kupisa kusingaperi, quintessential zororo, husimbe muzuva uye nguva yekuverenga par kugona pasi pemamburera, iyo yemhepo inodzikamisa kana kubhawa bhawa. Ini ndinotora idzi 7 news nekuda kwekuda kwakasiyana. Zvishoma zve rondedzero yazvino, zvimwe zve nhema uye nhoroondo, kubata kwe kuzvibatsira uye, hongu, ye eroticism, uye yakasviba yakasarudzika yakagadziriswa comic. Ngatione ..
1 Kupera kwekutarisa - Stephen King
2 Yese zhizha mupasi - Mónica Gutiérrez
3 Vakadzi Vanoda Zvakanyanya - Robin Norwood
4 Chinonaka Taboo - J. Kenner
5 Zvakajairika chokwadi chechipiri Hondo Yenyika - Jesús Hernández
6 Nero yeNhema - Lindsay Davis
7 Muurayi Mukati Me - Devin Faraci naVic Malhotra
Kupera kwewatch - Stephen King
Iri zita ndiko kupera kwekufona Bill Hodges Trilogy iyo tenzi weanotyisa genre akatanga nayo VaMercedes ndokuenderera mberi Ndiani anorasikirwa anobhadhara. Retired Detective Hodges vanodzoka uye ikozvino vanomhanya yakazvimirira yekuongorora agency naHolly. Nhau dzekuti iwe une gomarara repancreatic uye chete mwedzi yekurarama haitadzise Hodges kubva kuferefeta a akateedzana kuzviuraya izvo zvine poindi imwechete zvakafanana: vese vakafa vaiwirirana Brady hartsfield, vane mukurumbira Mercedes.
Hodges naHolly vakasiya mhondi mune inomera mamiriro iyo inotevera. Asi chiremba wepachipatara anga achimupa mishonga yekuyedza iyo yaakapihwa. masimba matsva, kusanganisira kugona kufambisa tunhu tudiki nepfungwa uye kupinda mumitumbi yevanhu vanotambura. Uye Brady anotarisira kusvika kune vamwe vechidiki vakapukunyuka rufu, kunyangwe chaanonyatsoda kukwezva Hodges.
Zhizha rose repasi - Monica Gutierrez
Mónica Gutiérrez akazvarwa uye anogara muBarcelona. Iye ane degree muJenhau uye Nhoroondo. Sanganisa kunyora nekudzidzisa. Musoro wenyaya ino haugone kuve wakakodzera panguva ino. Inotiudza iyo nyaya ye Helena, uyo akatsunga kuroora muSerralles, iro taundi rehusiku hwake hwese hwehudiki. Ikoko anodzokera kumba kwevabereki vake ku gadzirira muchato uye osanganazve nehama dzake nevanin'ina. Asi ipapo Helen achagumburwa Marc, shamwari yakanaka yaakange asisaone, uye hupenyu hwake mumusha hwashanduka.
Vakadzi vanoda zvakawandisa - Robin Norwood
Zvishoma zvishoma kuzvibatsira kune avo vakadzi vanoda zvakawandisa uye zvakare vanofanirwa kudzidza kugona kuzvida ivo pachavo kuti vabatsire hukama hwavo zvakare. Norwood inobatsira vakadzi vakapindwa muropa nerudzi urwu rwevanovimba uye vane moyo murefu-rudo rudo kuziva, kunzwisisa, uye kuchinja nzira yavanoda. Uye inozviita kuburikidza zvipupuriro uye nyaya inotsigirwa nechirongwa chekudzoreredza.
Taboo inonaka - J. Kenner
Uye pamazuva aya kuti usaedzwa sei zvishoma eroticism? J. Kenner nderimwe remazita akakura mune dzerudo.
Munyori we trilogies Stark (yakagadzirwa na Ndisunungure, Nditorere ini y Ndide) uye Wish (yakaumbwa na Kuda, Kunyengedzwa y Red Hot), ikozvino inouya nedenhement yekupedzisira, Chivi, iyo yakagadzwa munyika yeumbozha, zvakavanzika uye zvishuwo zvakarambidzwa kwazvo.
El Dutu rerudo pakati paJane naDallas Iye achiri kutyisidzirwa kwete chete nekusanzwisisa kwevadikanwi vake, asi nemunhu anoda kuvakuvadza uye anoda kuzviwana zvakadaro. Dallas haazive kuti ndiani ari kumashure kwekutyisidzira uku, asi anoziva kuti pasina Jane parutivi rwake, hapana chingafanana. Ipapo iye anozorora uye Dallas achaita chero chinhu kumuwana nekumununura.
Zviitiko zvisina kujairika zveChipiri Hondo Yenyika - Jesu Hernandez
Zvishoma zvishoma nhau kune vanonyanya kuda zvemhando iyi uye kunyanya ye Hondo Yenyika Yechipiri, kuti tiri vazhinji. Panguva ino isu takasarudza kuperekedza nhamo pamwe anecdotes, zviitiko zvisingatarisirwi, kana zvikamu zvehumhare zvakakosha zvekuyemura. Kana isu tikawedzera inonakidza rondedzero, isu tinowedzera kuverenga zvakanyanya.
Uye zvimwe zvezvikamu zvacho zvine mukurumbira mutambo wenhabvu yemuvhi Kunzvenga kana kukunda yakaitirwa muKiev, pakati peDynamo nechikwata cheGerman, uye yakaguma zvinosuwisa. Zvakare izvo Germany yakakwanisa kutora nzvimbo yeBritish seChannel Islands, kana kuti Hitler akapa mubairo kune chero munhu akabata mutambi ari mupenyu Clark gable, uyo aive mune vashandi veAmerican bomber.
Nero wenhema - Lindsay Davis
Lindsey Davis anga achifungidzirwa kubvira Agatha Christie weMambo hweRoma (nevanhu vakaita saSantiago Posteguillo) kusvika iyo mambokadzi wenhoroondo yekunyengera. Uye ndizvozvo hongu Didius Falco ndiye mutikitivha anozivikanwa kwazvo wengano yekare, mwanasikana wake wekurera Flavia albia haasi kumashure kumashure uye akadzidza hunyengeri hwake hwese. Ino nguva tinayo mune imwe nyowani kesi.
Uye ndezvekuti kubvira paakafira mu68 neruoko rwake, runyerekupe rwunoramba rwuchimhanya muRome yese uye ichivimbisa izvozvo mambo nero mupenyu uye akagadzirira kutora chigaro chake. Vanotozvitora sezvisina basa sezvo asvika pamuzinda weHumambo.
Flavia Albia achange achitungamira mukutsvaga kuti ichokwadi chii mukutyisidzira, kunyangwe haafarire kushanda kuna mambo Domitian. Asi mhuri yaFlavia inoda mari yekomisheni. Uye kugadzirisa nyaya yacho Flavia haazove nesarudzo kunze kwekupinda mukati nzvimbo dzine njodzi, kutengeserana nevasori uye kunzvenga mhondi kutumwa nemutengesi.
Mhondi mukati mangu - Devin Faraci uye Vic Malhotra
Uye kana ini ndikatanga naStephen King, ini ndinopedzisawo naye nekuti ndiye anozivisa izvi kuchinjika kune comic yeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye nerima manzwi e Jim thompson, iyo North America tenzi weiyo genre. Izvi rakanyorwa naDevin Faraci uye madhirowa asainwa Vic Malhotra. Iwo mavignettes anochengetedza iyo nhema nhema toni yemavara ekutanga, rakasviba rakanyanya uye rakakora chiono chemafungiro e mhondi mumutsara waCharles Manson, asi pakutanga.
Iye protagonist ndiye Lou ford, mutevedzeri washeriff kubva kuguta diki reTexas. Asingade mumabasa ake uye aine hunofungidzirwa hunobhowa uye kusagutsikana ndicho chinhu chakaipisisa chingataurwa nevanhu nezvake. Izvo zvinoitika ndezvekuti vanhu ava havazive nezve iyo kurwara Yakapotsa yamuuraya achiri mudiki. Uye icho chirwere chinoedza kumukazve nenzira yakaipisisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Chikunguru. 7 edhiyo nhau dzemwedzi wechinomwe wegore
Akanakisa Mifananidzo Mabhuku Evakuru
"Vakanganwa Mambo Gudú." Bhuku raAna María Matute rakandimaka kweupenyu hwese.